Hamro Pustaप्रधानमन्त्री ओलीले गरे ५७ अर्ब १० करोड लागतका एक सय ६५ रणनीतिक सडकको शुभारम्भ – Hamro Pusta
संघीय संसद्को प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा रणनीतिक सडक ३ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य, कुल २ हजार २१० किलोमिटर सडक थप कालोपत्रे हुने, सडक बहुवर्षीय र दुई लेनको हुने
सरकारले संघीय संसद्को प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा रणनीतिक सडक निर्माण कार्यको शुभारम्भ गरिएको छ । शनिबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बालुवाटारबाट निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रमको भर्चुअल शुभारम्भ गरेका हुन् । देशभरका कुल १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा १ सय ६५ सडक छनोट भइसकेका छन् । ती सडकको अनुमानित लागत ५७ अर्ब १० करोड रहेको छ । सडकलाई बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ ।
राष्ट्रिय सडक सञ्जाल दु्रत गतिमा अघि बढेको तथा मापदण्ड पूरा गरेर सडक छनोट गरिएको उनले जानकारी दिए । दुई लेनका सडकका लागि बजेट सुनिश्चित भइसकेको छ । अहिले अलपत्र परेका र पूरा नभएका, रुग्ण बनेका सडकलाई पनि यस सूचीमा राखिएको छ । ‘यसलाई पर्यटन, कृषि र बजार जोड्न पनि सहयोगी बन्नेछ,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले भने । तोकिएको समय, लागत र गुणस्तरमा सडक सम्पन्न हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले दाबी गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार गठन भएको ३ वर्षमा पूर्वाधार क्षेत्रमा धेरै काम भएको बताए । सरकार गठन भएको फागुन ०७४ देखि ०७७ फागुनसम्ममा ३ हजार ५ सय १२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, ३ हजार ३ सय ग्राभेल र १ हजार ६ सय ८६ किलोमिटर माटे सडक निर्माण भएको जानकारी दिए । त्यस्तै, ६ सय २८ सडक पुल निर्माण बनेको तथ्यांक उल्लेख गरे । आयोजनालाई समयमा सम्पन्न गर्नका लागि आउँदा दिनमा टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम) को प्रयोग गरेर खानेपानी, सिँचाइ र जलविद्युत्को क्षेत्रमा प्रयोग बढाउँदै लैजाने बताए ।
इन्धनको मूल्य फेरि बढ्यो : पेट्रोल ११८ पुग्यो
सुनको भाउ तोलामा ६०० रुपैयाँ घट्यो, आज कति रुपैयाँमा होला कारोबार ?
कोराना महामारीबीच पनि ६ महिनामा बीमा कम्पनीले आर्जन गरे ७८ अर्ब, कुनको कति ?
खैरहनी बजारमा प्रशासनको अनुगमन, खरिब बिल नदेखाउँदा १३ वटा पसललाई कारबाही
युट्युबको पार्टनर प्रोग्राममा पर्‍यो नेपाल, मनिटाइज गर्न सजिलो हुने